Dagaal dhexmaray ilaalo ka tirsan shirkado bixiya Korontada – Somali Top News
Dagaal dhexmaray ilaalo ka tirsan shirkado bixiya Korontada
January 15, 2019 Somali Top News	0 Comments
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in dagaal uu dhexmaray ilaalo ka tirsan shirkado Koronto oo ku yaalla magaaladaasi.
Waxaana dagaalkaani uu u dheexayay ilaalada shirkadaha Golis iyo Eeneyo oo ah shirkado bixiya koronto kana howgalla magaalada Boosaaso.
Dagaalkan ayaa waxaa la sheegay in ay sabab u tahay isb qabqabsi koronto galinta magaalada oo ka dhexeeyay labada shirkadood, waxaana horay u jirtay ismaan dhaaf aan gaysan gacan ka hadal oo shirkadan dhex maray.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka Magaallada Boosaaso gudaheeda ku dhexmaray ilaalada shirkadahaasi ku dhaawacmay Afar qof oo labba kamid ahi ay ahaayeen ilaalada dagaalku dhexmaray halka labbada qof kalana ay ahayeen Shacab.
Gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo ,duqa degmada Boosaaso C/salaan Bashiir C/salaan iyo Taliye ku xigeenka qeybta Booliska gobolka Bari Axmed Jaraale ayaa gaaray goobtii uu dagaalku ka dhacday, waxayna xabsiga dhigeen mas,uuliyiinta labada shirkadoodo, iyo ilaada wada dagaalamay.
← Wararkii ugu dambeeyay Al shabaab oo weerar ku qaaday Hoteel ku yaala Nairobi
Mid kamid ah madaxda maamul Goboleedyada dalka oo ka badbaaday weerarkii Nairobi →
November 14, 2018 Somali Top News 0
Yaa Kenya garab ku siinaya cadaadiska ay ku heyso Dowladda Soomaaliya?
Dowladda Qatar Iyo Qorshaha Dhabta Ah Oo Soomaaliya Ay Ka Leedahay
June 1, 2018 Somali Top News 0